Shwe Sar – Page 458 – Daily News
ကျန်းမာရေး အတွက် လည်း အကျိူးများ တဲ့ သင်္ဘောစေ့ ရဲ့ စွမ်းပကား
သဘောင်္သီးကို စားတဲ့အခါမှာ အစေ့ကိုအမြဲတမ်း လွှင့်ပစ်လေ့ရှိပါတယ်။ သင်္ဘောစေ့ရဲ့ အကျိုး ကျေးဇူးတွေကို သိပြီးရင်တော့ လွှင့်ပစ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ တွေးမိပါတ ယ်။ဘာ လို့လဲ ဆိုေ တာ့ သင်္ဘောစေ့မှာ ရောဂါပေါင်းများစွာကို ကုသပေးနိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေပါဝင်နေလို့ပါပဲ။သင်္ဘောစေ့ရဲ့ ကျန်းမာရေး […]
လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ တစ်သက်တာမှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် မျက်ရည် 16.5 ဂါလန်ခန့် ငိုတယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေက ငိုရတာထက် ခံစားချက်တွေကို မျိုသိပ် ထားရတာကို ပိုပြီး သဘောကျပါတယ်။ စိတ်ခံစားရလို့ ငိုခြင်းက […]
ဒီတစ်ခါ အာသီးရောင်ပြီး လည်ချောင်းနာ တဲ့ သူတွေ အတွက် နာရီပိုင်း အတွင်း သက်သာာပျာက်ကင်းစေမည့် သဘာဝ ဆေးနည်းတွေကို ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။ အာသီးရောင်ခြင်း ကို (Ton sillitis) လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ဘာ့ကြောင့် အာသီးရောင်ပြီး လည်ချောင်း နာရသလဲ […]
ဈေးဝယ်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်ရင် အင်္ကျီ၊ ဖိနပ်၊ ဆံပင်၊ သတင်းစာတွေမှာ ကိုဗစ်ပိုး ကပ်ပါလာနိုင်သလား?
ဒီကိစ္စကို ရောဂါပိုးကျွမ်းကျင်သူတွေဖြေထားတာရှိပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လေ အင်္ကျီလဲပြီး ခေါင်းကနေလောင်းပြီး ရေချိုးပစ်ရမှာလား? အပြင်ထွက်ရင် ဈေးထဲမှာ Social Distancing လု ပ်ပြီး ခပ်ခွာခွာဈေးဝယ်ကြပါသလား?ဥပမာ – City Mart မှာ ဈေးဝယ်တယ်၊ ခပ်ခွာခွာရပ်တယ်။ လူတွေနဲ့ ထိတွေ့မှုနည်းတယ်။ […]
ပရိသတ်ကြီးရေ.. ဂီတလောကမှာ သီချင်းတွေများစွာ ထွက်ရှိထားကာ ပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ အပြည့်အဝရရှိထားသူတွေထဲမှာ အဆိုတော်ကျော်ကျော်နန္ဒကလည်း အပါ အဝင်ပါပဲနော်..။ ကျော်ကျော်နန္ဒကတော့ သီချင်းလေးတွေ ထွက်ရှိထားသလို နောက်ထပ်ထွက်ရှိမယ့် သီချင်းအသစ်လေးဖြစ်တဲ့ မမဆောင်းနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ သီချင်း MTV လေးကို […]
ကိုရီးယားမလေးလို အရမ်းကိုလှပတဲ့ အသားအရည်လေး နဲ့ ချစ်ဖို့ ကောင်းလွန်းနေတဲ့ ဟန်နာယူရီ
ပရိသတ်ကြားမှာအရမ်းရေပန်းစားပြီး တစ်ခဲနက်အားပေးခြင်းကိုခံနေရတဲ့မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင်မလေး ဟန်နာယူရီကို ပရိသတ်ကြီးတွေလည်းသိမှာပါနော်။ အားလုံးရဲ့အချစ်တော်လေး လည်ြး ဖစ် သလို အရုပ်မလေးနဲ့ တူတဲ့သူမရဲ့ မျက်နှာလေးရယ် ကိုရီးယားမလေးလို အရမ်းကိုလှပတဲ့ အသားအရည်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးဖြစ်တဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေ အချစ်ပိုနေခဲ့ရ တာ လ ည်ြး […]
.က ကနေ အ အထိ ပါ သည် ဆေးညွှန်း မြီးတိုလေး များ ရှယ် ပြီး သိမ်း ထား ပါ.
ဆေးညွှန်း မြီးတိုလေးများ ရှယ် ပြီး သိမ်း ထားပါ… —-ကလေးချွဲထပျောက် ဆေးနည်း —- မြင်းခွာရွက်သတ္တုရည်ကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်းငယ် တစ်ဇွန်းခန့် တိုက်ပါ။ ချွဲ သလိပ်များ ကျဆင်းပါသည်။(တစ်နည်း)ကြိတ်မှတ်ရွက်၊ ခွေးသေးပန်းရွက် တို့တွ င် ရှိန်းခိုးအနည်းငယ်ထည့်၍ […]
စိတ်အေးချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်ဖို့ အတွက် ဘာတွေ လုပ်ရမလဲ
လူတော်တော်များများက ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာရေးကိုပဲ ဂရုစိုက်တက်ကြပြီး စိတ်ကျန်းမာရေး ရဲ့ အရေးပါပုံကို တော့ မေ့ထားတက်ကြပါတယ်။ စိတ်ကျန်းမာရေး ဟာလည်း လူတွေ အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ စိတ်ချမ်းသာမှ ကိုယ် ကျန်းမာတာပါ။ စိတ်ချမ်းသာအောင် […]
ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ … သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ဆုမြတ်နိုးဦးကတော့ ပြုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ တစ်မှုထူးခြားတဲ့ အလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူလေးပါနော်။ ဆြု မတ်နိုး ဦးကတော့ အနုပညာလမ်းခရီးကို ယုံကြည်မှုရှိရှိ အကောင်းဆုံးလျှောက်လှမ်းနေပြီး ယခုဆိုရင် နေရာတစ်နေရာကို […]
ဖြူဖွေးဝင်းဥနေတဲ့အသားအရည်လေးနဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်လိုချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်
ပရိသတ်ကြီးရေ……ချစ်စရာကောင်းပြီး သရုပ်ဆောင်လည်းကောင်းသလို အနေအေးတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေ အမြဲအချစ်ပိုနေကြရသူလေးဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီမင်း သမီးေ ချာေ လး စိုးပြည့်သဇင်ကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ စိုးပြည့်ဟာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ရိုးရိုးအေးအေးလေးနဲ့ နေလေ့ရှိတဲ့သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စိုးပြည့်ဟာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း ဆက်တိုက်ဆိုသလိုလုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီး သူမပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ […]